Mareykanka iyo Yurub oo qarka u saaran dagaal ganacsi - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMareykanka iyo Yurub oo qarka u saaran dagaal ganacsi
Washington (JigjigaOnline) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in go’aanka Ururka Ganacsiga Adduunka uu Mareykanka ugu ogolaaday inuu canshuur dheeri ah saaro badeecadaha Midowga Yurub uu yahay guul wanaagsan.
Ururka ganacsiga adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo WTO ayaa shalay go’aan uu soo saaray ugu ogolaaday Mareykanka inuu cashuuro dheeraad ah saari karo waddamada Yurub, si uu uga aarguto taageerada Midowga Yurub siiyo shirkadda diyaaradaha sameysa ee Airbus.
“Mareykanka waxa uu abaal-marin 7.5 bilyan oo dollar ah ka helay Ururka Ganacsiga Adduunka taasi oo ka dhan ah Midowga Yurub oo sanado badan si xun ila dhaqemayey Mareykanka, isaga oo saarayq canshuuro, xannibaado ganacsi iyo ka badan” ayuu Trump ku qoray bartiisa twitter-ka.
Mareykanka ayaa ku dooday in taagerada Midowga Yurub ee shirkadda Airbus ay dhaawaceyso shirkadaha diyaardaaha sameeya ee Mareykanka ee loolanka uu kala dhaxeeyo Airbus.
Dhaqaalyahannada ayaa ka digay in canshuuraha la isugu jawaabayo ay dhaawici karto dhaqaalaha adduunka, oo markii horeba ay waxyeelo kasoo gaartay dagaalka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka.
Madaxweyne 1 milyan oo doolar ka qaatay dambiile aad loo raadinayay